ယူနန်အနေဖြင့် “One Belt One Road” တည်ဆောက်မှုတွင် ဝန်ဆောင်မှု ပိုမိုပေးနိုင်ရန်အတွက် အဆက်မပြတ် ကြိုးစားအားထုတ်လျက်ရှိ
2019-05-28 00:00 source：
ယူနန်၏ပထဝီတည်နေရာနှင့် တံခါးဖွင့်ခြင်းသည် ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအားသာချက်များဖြစ်သည်။
ယူနန်၏ တောင်အာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှ အချက်အချာဒေသဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍအား ပိုမိုတိုးတက် လာစေရန် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း? ယူနန်အနေဖြင့်“One Belt One Road” တည်ဆောက်မှုတွင် ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း? မည်သည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်နည်း?
ယူနန်ပြည်နယ်သည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် တောင်အာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာ အဓိက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုအား အဓိက လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် တရုတ်-ဗီယက်နမ်ရထားလမ်း တရုတ်ဖက်ခြမ်း တည်ဆောက်မှုမှာ အားလုံးပြီးစီးြ၍ အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်ဖက်ခြင်း လောက်ကျဲ-ဟိုင်ဖုံလမ်းပိုင်းမှာ ရထားလမ်းပြုပြင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေလေ့လာဆန်းစစ်မှုအား ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ တရုတ်-လာအို-ထိုင်းရထားလမ်း တရုတ်ဖက် ခြမ်း ယွိရှီး-မော်ဟန်းလမ်းပိုင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပ လာအိုဖက်ခြမ်း မော်တင်း-ဗီယန်ကျင်းလမ်းပိုင်းမှာ အရှိန်မြှင့်တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တရုတ်-မြန်မာရထားလမ်း တရုတ်ဖက်ခြမ်း တာလီ-ရွှေလီလမ်းပိုင်း တည်ဆောက်မှုအား အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လင်ချန်း-ချင်းရွှေဟော်ရထား လမ်းနှင့် မန်စီ-ဟိုချောင်ရထားလမ်းမှာ ကနဦးလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံဖက်ခြမ်း မူဆယ်-မန္တလေးရထားလမ်းပိုင်း ဖြစ်နိုင်ချေလေ့လာဆန်းစစ်မှုအား ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ယူနန်နှင့် ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ မြန်မာနိုင်ငံတို့နှင့် ချိတ်ဆက်သည့် ကူမင်း-ဟနွိုင်း၊ ကူမင်း-မော်တင်း၊ ကူမင်း-ရွှေလီ အမြန်လမ်းမများမှာ အလုံးစုံ တည်ဆောက်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်။ လာအိုနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဗီယန်ကျင်း-မော်တင်းနယ်စပ်ဂိတ် အမြန်လမ်းမ၏ ဗီယန်ကျင်း-ဝမ့်ယုံလမ်းပိုင်းမှာ တည်ဆောက်နေဆဲ ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီး၍ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ချိတ်ဆက်မည့် ဒုတိယမြောက် အမြန်လမ်းမဖြစ်သည့် မော်ကျန်း-လင်ချန်း-ချင်းရွှေဟော် အမြန်လမ်းမအား အရှိန်မြှင့် တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအားဖြတ်ကျော်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ဆက်သွယ်မည့် ထိန်ချုံး-ဟိုချောင်အမြန်လမ်းမမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီး၍ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယူနန်နှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအကြား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုမှာ ပိုမို ပြီးပြည့်စုံ လာမည်ဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုများပြားလာခြင်း
လက်ရှိအချိန်တွင် ယူနန်ပြည်နယ်သည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ“အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်”အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အလား အလာကောင်းများဖြင့် ပြည့်နှက်လျက်ရှိသည်။
လေ့လာသိရှိမှုအရ ယူနန်ပြည်နယ်အနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မဟာဗျူဟာ၊ အစီအစဉ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားရှိမှုအား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဒေသတွင်း နိုင်ငံတကာစွမ်းအင်ကွန်ယက် တည်ဆောက်ကာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံ၊ အလွှာပေါင်းစုံ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ယူနန်ပြည်နယ်သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဓါတ်အားလိုင်း အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု စီမံကိန်းအား အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတကာလျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကုန်သွယ်မှုအတိုင်းအတာနှင့် ပမာဏ အား တိုးမြှင့်နိုင်ရန် အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ တရုတ်-ဗီယက်နမ်၊ တရုတ်-မြန်မာ 500 KVA လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ယက် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုစီမံကိန်းအား အလျင်မြန်ဆုံး စတင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တရုတ်-လာအို၊ တရုတ်-မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရှ့် 500 KVA လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ယက် ချိတ်ဆက်ခြင်းစီမံကန်း ကနဦးလုပ်ငန်းအား စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများနှင့် ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ယက် တည်ဆောက်မှုနှင့် အဆင့်မြှင့်တင် ခြင်းလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ လာအိုနိုင်ငံ၏ 500 KVA ပင်မလျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ယက်၊ လာအိုနိုင်ငံ ဗီယန်ကျင်းမြို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ယက်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ယက် စသည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းအား ဦးစားပေးဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ သာကေတ သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံး ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ ဒုတိယ အဆင့်စီမံကိန်းအား အလျင်အမြန် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုအပ်ချက်အား ပြေလျော့စေမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်-မြန်မာရေနံပိုက်လိုင်း ဒုတိယ အဆင့် တိုးချဲ့ခြင်းစီမံကိန်းအား ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
အနာဂတ်တွင် ပိုမိုများပြားသည့်နိုင်ငံများသည် တရုတ်နည်းပညာ၊ ယူနန်စွမ်းအင်အား အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ယူနန်ပြည်သူများမှာလည်း ဒေသတွင်း စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့် အကျိုး အမြတ်များ ခံစားရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား မြှင့်တင်ခြင်း
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်“One Belt One Road”တည်ဆောက်ခြင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အရေးပါသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ သာမန်ပြည်သူများ အား အကျိုးအပြုနိုင်ဆုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်။
ယူနန်သည် တရုတ်-အင်ဒိုချိုင်းနားကျွန်းဆွယ် စီးပွားရေးစြင်္ကန့်၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်-တရုတ်-အိန္ဒိယ-မြန်မာ စီးပွားရေးစြင်္ကန့်နှင့် တရုတ်-မြန်မာ၊ တရုတ်-လာအို စီးပွားရေးစြင်္ကန့် တည်ဆောက်မှုအား အခြေပြုကာ သတ္တုဗေဒ၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား၊ စက်ကိရိယာထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဓါတုဗေဒ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း၊ အသေစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍများတွင် တောင်အာရှ၊ အရှေ့ တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ နိုင်ငံတကာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စံပြဧရိယာအဖြစ် တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပြီး ကြံ၊ စပါး၊ ပြောင်း စသည့်သီးနှံများ၏ ကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့ရေးစခန်းအား ပူးပေါင်းတည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် သဘာဝရာဘာနှင့် သကြားထုတ်လုပ်ရေး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အား တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။ ယူနန်ပြည်နယ်အနေဖြင့် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အား အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၌ စံချိန်စံနှုန်း နှင့် ကိုက်ညီသော၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင် သဟဇာတဖြစ်သော မွေးမြူရေးနှင့် တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်ရေးစခန်း တည်ဆောက်မှုတွင် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ် သည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကုမ္ပဏီ (၅) ခု မှ (၁၀) ခုကြားအား ပြုစုပျိုးထောင် ကာ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာစံပြဧရိယာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း အခြေစိုက်စခန်းအား ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင် ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းအား တစ်နေရာတည်း စုစည်းထားသည့် ပြီးပြည့်စုံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ပေါ်ထွန်း လာစေရန် အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒေသအလိုက် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် တိရစ္ဆာန် ကူးစက်ရောဂါ စီမံခန့်ခွဲခြင်း စမ်းသပ်ဧရိယာစီမံကန်း အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင် ရန် တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ယူနန်ပြည်နယ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကျေက်ဖြူစက်မှုဇုန်၊ မန္တလေး မြို့သာစက်မှုဇုန် ယူနန်ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းဧရိယာ၊ မြစ်ကြီးနား ဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေရှ့် သံမဏိလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စံပြဧရိယာ စသည့် ပြည်ပစက်မှုဧရိယာများအား အတူတကွ ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမည်ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံများအား ဖိတ်ခေါ်ကာ လာအိုနိုင်ငံ ဗီယန်ကျင်း Saysettha ဖွံ့ဖြိုးမှုဇုန်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်အတန်း ပိုမိုမြင့်မားလာစေရန် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်။ တရုတ်-လာအို မော်ဟန်း-မော်တင်း စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဧရိယာ တည်ဆောက်ခြင်းအား အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ကာ တရုတ်-မြန်မာ၊ တရုတ်-ဗီယက်နမ် နယ်စပ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဇုန် ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ရန်အတွက် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု အား တိုးမြှင့်ဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ယူနန်ပြည်နယ်နှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုအား ပိုမိုနီးကပ်စေပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား ပိုမိုနက်ရှိုင်း စေရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ပလက်ဖောင်းသည် တံခါးဖွင့်ခြင်း၏ အခြေခံနှင့် ကိုယ်ထည်ဖြစ်သည်။ ယူနန်အနေဖြင့် ရွှေလီ၊ မုံလား (မော်ဟန်း) ဖွံ့ဖြိုးရေးစမ်းသပ်ဇုန် ပလက်ဖောင်းအား အသုံးချကာ ကူမင်း၊ ဟုံဟော် လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေးဇုန် တည်ဆောက်ခြင်းအား အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ပြီး လင်ချန်း၊ ထိန်ချုံးစသည့် နယ်စပ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဇုန် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်သည်။
နန်နင်းကုန်စည်းပြပွဲ၊ ကူမင်းကုန်သွယ်ရေးပြပွဲ၊ တောင်အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ ကုန်စည် ပြပွဲ၊ ရင်းနှီးမြှင့်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲ စသည့် အကြီးစား နိုင်ငံတကာပြပွဲများ ပိုမိုအောင်မြင်စေ ရန်ဆောင်ရွက်ပြီး နယ်စပ်ကုန်စည်ပြပွဲ၊ တိုင်းရင်းသားပွဲတော်ပြပွဲ စသည်တို့အား ဆက်လက်ကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်-တောင်အာရှကုန်စည်ပြပွဲ၊ တရုတ်နိုင်ငံတကာခရီးသွားကုန်စည်ပြပွဲ စသည့် ဒေသတွင်း နိုင်ငံတကာပြပွဲအား ပြတင်းပေါက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ယူနန်အလယ်ပိုင်းဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်အား အမှီပြုကာ တံခါးဖွင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစမ်းသပ်ဇုန်၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဇုန်၊ နယ်စပ်ကုန်စည်ပြပွဲ စသည်တို့အား ရှေ့တန်းတင်သည့် တံခါးဖွင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှု ပလက်ဖောင်းစနစ် ပေါ်ထွန်းလာစေရန် အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ယူနန်ပြည်နယ်အနေဖြင့် နယ်စပ်ဂိတ်အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်မှုအား အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ပြီး နယ်စပ်ဂိတ်ဖြတ်ကျော်ခြင်း အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးအတွက် လွယ်ကူသည့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုနှင့် အဆင်ပြေ ချောမွေ့သည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုအား ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်သည်။
ယူနန်ပြည်နယ်အနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပလက်ဖောင်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများအကြား ဆက်ဆံရေးအပေါ် အခြေခံသည်။ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများအကြား တည်ရှိသည့် နားလည်မှုနှင့် ယုံကြည်မှုသည် အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ၏ ခိုင်မာသည့်အုတ်မြစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲစေမည်ဖြစ်သည်။
အနာဂတ်တွင် ယူနန်အနေဖြင့် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယူနန်သို့ ပညာတော်သင် စေလွှတ်သည့်ပမာဏ ပိုမိုများပြားလာစေရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ပညာရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်အား တည်ဆောက်ကာ အဆင့်မြင့်ပညာရေး ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် ကွန်ဖြူးရှပ်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်းအား အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက် ကာ“တရုတ်စကား ပေါင်းကူးတံတား (Han Yu Qiao) ”ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အလယ်တန်းကျောင်းသာ တရုတ်ဘာသာပြိုင်ပွဲအား တရုတ်စာအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာသို့ ထိုးဖောက်ရာတွင် အရေးပါသည့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့် ကူမင်းမြို့အား ဒေသတွင်း နိုင်ငံတကာဆေးဝါးကုသရေးစင်တာအဖြစ် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအား ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကူမင်းဒေသတွင်းနိုင်ငံတကာရောဂါထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ တည်ဆောက်ပြီး တောင်အာရှ၊ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများဆိုင်ရာ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး၊ ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာသည့် အများပြည်သူကျန်းမာရေး ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ်စီမံခန်းခွဲရေး စသည့်တို့အား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
လန်ချန်-မဲခေါင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကူစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ “စက္ခုဒါနခရီးစဉ်” ၊ “ချစ်ခြင်းမေတ္တာခရီးစဉ်” စသည့် နိုင်ငံတကာ ပရဟိတ ကုသရေးအစီအစဉ်များအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ယူနန်အနေဖြင့် နိုင်ငံတံခါးပေါက်ယဉ်ကျေးမှု တည်ဆောက်ခြင်း၊“နယ်စပ်ပြတင်းပေါက်”စီမံကိန်း စသည်တို့အား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ရှိ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပြီး တရုတ်-ကမ္ဘောဒီးယား ယဉ်ကျေးမှုဖန်တီးမှုဇုန် တည်ဆောက်ကာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ တွင် တရုတ်စာကြည့်တိုက်၊ တရုတ်ဘာသာလေ့လာရေးကျောင်း တည်ဆောက်မှုအား ပံ့ပိုးကူညီသွား မည်ဖြစ်သည်။
မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းနိုင်ငံများ မီဒီယာဖလှယ်ရေး၊“One Belt One Road”မီဒီယာတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု ဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်တို့အား အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကူမင်းနိုင်ငံတကာမာရသွန် ပြိုင်ပွဲကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲအား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ အားကစားယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ရေး၊ ကုန်းပြင်မြင့်လေ့ကျင့်ရေးသုတေသနတို့အား ပေါင်းစည်းထားသည့် ကူမင်းကုန်းမြင့်ပြင်ဒေသ အားကစားနှင့် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ရေးအခြေစိုက်စခန်းအား တည်ဆောက် သွားမည်ဖြစ်သည်။
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ခရီးသွားကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ယူနန်အနေဖြင့်“ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံဖြင့် ယူနန်တစ်ပြည်နယ်လုံးအား လည်ပတ်နိုင်ခြင်း”ရည်းမှန်းချက်အား အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အလုံးစုံအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအား အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခရီးသွားခြင်း စမ်းသပ်မှုဇုန်နှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခရီးသွားခြင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုဇုန်အား တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် လေ့လာဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ခရီးသွားအရင်းအမြစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်း၊ လမ်းကြောင်းအသစ်ရှာဖွေခြင်း၊ အမှတ်သင်္ကေတ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုံခြုံရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအာမခံချက် စသည့်ကဏ္ဍရပ်များတွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား ပိုမိုခိုင်မာစေရန် ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံများစွာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ခရီးသွားလမ်းကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် တောင်အာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ ခရီးသွားဇုန်အား တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။ လန်ချန်-မဲခေါင် ခရီးသွားမြို့များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်ရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ် သည်။
ထို့အပြင် ယူနန်အနေဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အကြံပေးအဖွဲ့များ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအား ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယူနန်ပြည်နယ်နှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး ကျယ်ပြန့်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကူးလူးဆက်ဆံခြင်း ပိုမို နီးကပ်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ ဒေသအစိုးရနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း များအကြား အပြုသဘောဆောင်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန် ဆောင်ရွက်ကာ နယ်စပ်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ကူးလူးဆက်ဆံခြင်းပုံစံသစ်အား လေ့လာဖော်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ယူနန်အနေဖြင့် တောင်အာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ၊ ပိုမိုချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကံတူအကျိုးပေး အသိုက်အဝန်းတစ်ခုအား အတူ တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ (ယူနန်နေ့စဉ်သတင်းစာ)